गर्भवती हुन के गर्ने ? | Kendrabindu Nepal Online News
गर्भवती हुन के गर्ने ?
४ भाद्र २०७६, बुधबार १४:५२
विवाह भएपछि सबैतिरबाट साथीसँगी तथा आफन्तको प्रश्न ओइरिन थाल्छन्, खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइने हो ? दुईबाट तीन हुने कहिले हो ? जवाफ दिँदादिँदा हैरान । अर्कातिर विवाहति जोडीको विचार अर्कै हुन्छ । पहिले करिअर निर्माण अनि मात्र फेमेली प्लानिङ ।
हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशु जन्माउँछन् । उनीहरूबीच यति महिनापछि, यति वर्षपछि मात्र सन्तान ट्राइ गर्ने भनेर योजना बनेको हुन्छ । यद्यपि गर्भवती हुन सोचेजस्तो सहज नहुनसक्छ । कसैलाई एउटै प्रयासमा गर्भ रहनसक्छ भने कसैलाई महिनौं प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गर्भवती हुनका यौनसम्बन्ध राख्नु जति जरुरी छ उति नै जरुरी कसरी र कहिले यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु आवश्यक छ । यी कुरालाई बेवास्ता गर्दा गर्भ नरहन पनि सक्छ ।
शोधअनुसार धेरैजसो दम्पतीलाई गर्भ रहनका लागि कुन समय सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको पाइयो । सेक्सको समय सही भयो भने गर्भ बस्न कठिनाइ हुँदैन ।
गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा कहिलेकाहीँ समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ ।
पुरुष प्रजनन कोष ‘शुक्रकीट’ महिलाको गर्भाशयमा अवस्थित अण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गरेपछि महिला गर्भवती हुन्छिन् ।
कति पटक राख्ने यौनसम्बन्ध ?
यस विषयमा एउटा प्यारेन्टिङ वेबसाइटले १ हजार १ सय ९४ दम्पतिमाथि अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा सामेल सबै दम्पति सन्तान चाहनेहरू थिए । अध्ययनमा उनीहरूले गर्भधारणका लागि कति पटक सेक्स गरेका थिए भन्ने कुरा जान्न प्रयास गरिएको थियो ।
के देखियो त ?
आमाबाबु बन्न चाहने ती दम्पतीलाई औसतमा ७८ पटक सेक्स गर्दा सफलता हात लागेको थियो । यो क्रम औसत छ महिना चलेको थियो भने उनीहरूले एक महिनामा औसत १३ पटक सेक्स गरेका थिए ।
गर्भधारणका लागि कुन आसन ?
कतिपय मानिसमा के विश्वास छ भने गर्भधारण आसनमा पनि निर्भर हुन्छ । यसका लागि लगभग तीन चौथाइ मानिसले मिसनरी पोजिसन (महिला तल र पुरुष माथि सुतेर गरिने यौन आसन) लाई उपयुक्त माने भने ३६ प्रतिशत जोडीले डगी स्टाइल रुचाए ।
डिम्ब निष्कासन प्रक्रियामा निस्किएको डिम्ब १२ देखि २४ घन्टासम्म फर्टिजाइज हुन सक्षम हुन्छ । यौनसम्बन्धका क्रममा योनिमार्गबाट प्रवेश गरेको पुरुष शुक्रकीट महिला प्रजनन प्रणालीमा ५ दिनसम्म पनि रहन सक्छ ।
धेरै महिलामा महिनावारी चक्र ठीक २८ दिनमै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले महिनावारीको क्यालेन्डर बनाएर महिनावारी चक्रको लम्बाइ एवं मध्यविन्दुको अनुमान लगाउन सक्छन् ।
महिनावारी चक्रको क्यालेन्डरका अतिरिक्त डिम्ब निष्कासन समय अनुमान लगाउने अरू तरिका पनि छन् । तीमध्ये एउटा भेजाइनल सेक्रेसनमा ध्यान दिनु पनि हो । डिम्ब निष्कासनअघि भेजाइनल सेक्रेसन सफा, ओसिलो एवं लचिलो हुन्छ ।
शरीरको बेसिक तापक्रम (आरामको अवस्थामा शरीरको तापक्रम) मा ध्यान दिएर पनि डिम्ब निष्कासन समयको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक बिहान ओछ्यान छाड्नुअघि शरीरको तापक्रम जाँच्न सकिन्छ । तापक्रममा वृद्धि हुनुभन्दा २–३ दिनअघि कुनै पनि महिला गर्भवती हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जसरी बजारमा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट सहज रूपमा उपलब्ध छ त्यसरी नै ओभुलेसन (डिम्ब निष्कासन) डिटेक्सन टेस्ट किट पनि सजिलै पाइन्छ । यसको प्रयोगबाट डिम्ब निष्कासन भएनभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
उपर्युक्त कुराहरू हेरेर मोटामोटी प्रस्ट हुन सकिन्छ तर यति जानकारी पर्याप्त नहुन सक्छ । असामान्य अवस्थामा गर्भधारण गर्ने योजना बनाउनुअघि विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
गर्भधारण, प्रेगनेन्सी टेस्ट किट
Prevअस्ट्रेलियाली चर्चमा यौनकाण्डः कार्डिनल जर्ज पेल दोषी ठहर
रविपत्नी निकिताकाे जाहेरी लिएन प्रहरीलेNext